Ramaax Oo Cad Buka Cantuugay ( Abdi-shotaly) . | Baligubadlemedia.com
Ramaax Oo Cad Buka Cantuugay ( Abdi-shotaly) .
Beri baa Goosha Libaaxu waxay ku qadhaaban jirtay, bahasha la yidhaaho Yey-dda, mudo markay wadda shaqayna-yeen, bay bilawday yey-ddii in ay maalina soo wadda cunto wixii ay soo hesho, mar tidhaaho maanta wax-ba soo waayey, kola ay wax aan sidaa u sii ridnayn, oo cankeed-daba dhaafayn ay u keentaa, qisaddii bay u kuur gashay Gooshii, oo waxay ogaatay in yeydu khiyaamay-nayso, magaceedana ay ku shaqaysa-nayso, habar dugaaggii kale-na ay ka qadisay, oo ay ku tidhaaho waxan u geynayaa Goosha. markii ay intaasi dhacday, bay Gooshii u yeedhay yeyddii oo ay tidhi, dib dambe yaanan wejigaaga u arkin, sababta aan kuu leeyahay sidaas
waxa weeye, been baad ii sheegtaa, khiyaamo hoose-na waad igula ceeshtaa. Inantii yey-dda ahayd, inta ay labadda dhaban iyo dhafoorka qabsatay, bay iyadoo muraaradi-laacsan wadadda cabtay, iyadda oo iska qulub-luudaysa, socon kari la’, kolba raaf qaadaysa, baa waxay ku soo baxday, Waraabe meel cidla ah dhana uga dhaqaaqi kari la’, oo gaajadda awgeed ay boggii iyo beerkii isku dhegeen, dul fadhiya lax cudurka hulunbuhu hayo, oo diirkii iyo laftii, intuu kala dilaaciyey, wax uu ka cuno la’,isku canananaaya tan maxaa kuu geeyey ee aad ka dishay. Gabadhii yey-dda ahayd, Waxay tidhi Waraabaw bal iska waran? arin cayn-kaas ah baa igu dhacday, oo macaluul baan qal-dheba-yaaye, raqdan aad ku keliyey-satay waxa iga sii, inaadeertaa oo habar-dugaag ah baan ahay, wuxu yidhi ” Tuhun waa Sade”, malaha wax buu haystaa baad is leedahaye, ku soo dhawaw waa diir iyo laf khali-yahe, oo wax dib loo riixaa kuma dhex jiraane, amba xanuunka waan qabaa sidda lax-daase, haragaa buka ee Hulunbaha qaba kaalay oo ila wadaag, aynu wadda qaadno cudurka i dilaye, Yey-ddii waa ta cantuugo ka bogatay haraggii, isla markiiba sun iyo boog daacday. Wwaxan uga socdaa, aan idiin fasilo’e, Goosha waxa ku adeegan jirey, waa asakriga. Yeyda lagu shaqaysan jirey-na waa Ramaax, Waraabaha mar-kiisii hore-ba bukay-na, waa Faysal Zaad, oo waa kaa Raamaax cad buka cantuug-siiyey ( Cudurku waa Hinaasihii Waddaniye).
Qiso kale oo taas sare ku dhawi, iyana waxy tahay, Nin Cudurka feedhaha qaba ( TB) oo la karantii-meeyeye, bani’aadm-kana aan u soo dhawaanin, ilayn dadka buu ku faafina-yaaye, baa u yimi mid kale oo xanuunka laf-tiisii weli-giiba qabay oo isna meel hoganaaya cid iyo ciirsi la’ ah. lays waraysay, oo la isla fahan, waxa mid walba ku dhacay, ee ay dad iyo duun-yoba uga dhex baxeen. Odayggii cudurka hinaasaha ah abid-kiiba qabay baa wuxu yidhi, Isu soo galay, oo wax wadda qab waa aade, mar haddii aynu isku xanuun nahay, oo cudur C/Raxmaan Cirro la yidhaahaa ina wadda hayo, cid dawo inooga qortana aan waynay, waxa keliya ee aan ku bogsa-naynaa, waa in aan la hadhno Waddani, ilayn inaku wax-ba dooni-mayno, oo cid ina doora-naysaa ma jirto’e. Wax-na ay ku dambeeyeen in ay noqdaan, labaddii nin ee abeesadda isu dhiibay, kuwaas oo uu mid-ba kale jar u degaayey, si uu uga takhaluso, laakiin nasiib darro way isu dhameeyeen, abeesa-diina labdiiba qaniinyo bay kaga soo qaaday, suntii ku talaashay, halkiina ku naf waayeen. Kama qarsoona in haddii ay indhaha dhiig ka keenaan, aanu soo baxayn Ucid, Cid doora-naysaana aanay jirine, waxa heshiis lagu kala saxeexday, in luxudka la dhigo Cirro, inta yar ee cad quudheedka ahna, caydhinka lagu qayb-sado. inta la isku wehesha-nayaana, ay tahay Xanuunka TB ah, ee ay wadda qabaan. ilayn cid kale uma geli karo Ramaax, oo Gooshii Kulmiye ( Askariggii), foodkii ku shaqaystay, waakii ku dayriyey Gebilaye.
Waxan ku soo af-gooyey, oo sal u ah maqaalkan qayb-tiisan sare, nuxurka ku duuga-nina uu yahay, Ramaax Waakii hoos fadhiyi jirey Askariga loo yaqaan ” Raggii ma adigaa Ka hadhay” ee foodkii Burco wuxu ka samay-naayey la wadda og-yahay, Waa kii askarigii debedda u tuuray, mudo yar ka bacdi markuu Gebiley geeyey, sidda yey-ddii ay gooshu eriday, firxad-kiina u galay Waraabihii neefka buka cad-kiisa cantuug-siiyey ( Waa faysal Zaad). Hadaba hadal lama saarnaadee, waxan ku soo dabray, wuxu yidhi Abwaan Yawle (IHN) ” Ciilaw Ba’, Cuwaaf-lahaan Qarinayiyo Cali-na May Baanay”. Waan is qarin lahaa haddii aan ahay Cuqdad qabe Ramaax, shir aan ka hadlo iyo meel aan isi soo taago iskaba daayoo. Xaasid-nimo waa ta halkaa dhigtay Faysal Zaad, ee uu la hinqan-waayey, farsamo-na ay ka noqotay, ku shaqayso Gudoomiye baan ahay, kuna rux-ruxanaaya kolba ka dhiisha caanaha ah lulaaya ( waa Khasnada’e), horaase loo yidhi ” Labadda Xaaraanta ku heshiiyaa, xalaasha bay isku dilaane” Bal aan ka war dhawrno inta la isku qabsanaayo, lafta la dhnex dhigay, ee mid-ba dacal ka ruugaayo. Waxoogaaga ka soo gala Askariga, marka dabadda uu kaga soo qanjii-dhiyo Cirro labadan buka, ee uu laaca sidda sakaaradda u lulo., oo cirid madhan wax ku calaali-naaya, Gobol aan aan laga soo eriyini ma jiro, meel kale oo u hadhay oo loo dira-yaana iska ilaw iyana, markaas Mr Faysal Zaad, oo ay isku nooc yihiin, baa ku yidhi, waar aynu kala dgaalano madaxnimo Cirro’e, kaalay xiniini-yaha ila qabo, Faysal Zaad Intaa Wax ma Ku siinayaa? Calool baahani, calool kaloo baahan, wax ma tarto, ee haysku dul dawer-sadeen, ha laan wareegeen moqoro-fadda hoosta ka daloosha, ilayn inagama dedna aragtidda liidata ee ay leeyihiin iyo aqoon-toode.
N.B Labadda Xaaraanta Ku Heshiiyaa, Xalaasha Bay Isku Dilaan!